14 Mepee Uwe Azụ Zụọ Sholọ Ahịa Ugbu a - Ejiji
14 Mepee Uwe Azụ Ga-enyere Gị Aka Iche Uche A
14 Open Back Dresses Help You Feel Breeze This Summer
Bọchị ole na ole anyị enweghị ike ịnagide echiche nke iyi ezigbo uwe iji chee ihu igwe n'oge okpomọkụ. Ma ọ bụ ezie na tankị ndị dị n’elu na frocks dị ala na-enye ụfọdụ enyemaka, n’afọ a, anyị na-ahụ nnukwu mgbago na ụdị ikuku ọzọ: imeghe akwa azụ.
Omume a na-ekpughe n'ezie na-eweta ụfọdụ ihe ịma aka mkpuchi dị ala maka ndị ga-ahọrọ ịghara ịga kpamkpam n'atụghị egwu, mana anyị kwenyesiri ike na oke nchara na ụdị ahụ ekwesịghị igbochi gị ịnwe ma ọ dịkarịa ala ule-ịnya ụgbọ ala. Ihe aghụghọ a bu ihe ichota bra nke kachasi nma maka iko gi ma obu, ozo, n'egosiputa nkpu nkpuchi nke nwere ihe nkpuchi mara mma, njikota mara mma ma obu ihe ndi ozo mara nma n'azu. Uzo obula ichoro, lee uzo 14 mara mma imeghe iji nyere gi aka imeri okpomoku a n’oge oku a.
Njikọ: Bras kachasị mma maka iko ọ bụla
1. Obi ụtọ ụgbọ mmiri Long Uwe Ruffle Layer Backless siwing Mini Dresses
Nke a dị mfe, breezy mini na-abịa na agba anọ ma nwee ọmarịcha triangle ịkpụ na azụ. Enwekwara ọtụtụ ndị nyocha-nyefere foto ka ị nwee ike ịhụ etu o si ele onye ọzọ anya karịa ụdị ọkachamara maka echiche ka mma banyere etu ọ ga-esi daba gị IRL.
Odikwa na nha S ruo XL
2. SIR Alena Open-Back Linen Midi Uwe
Otu n'ime uwe a na-achọ achọ na uwe na-enweghị azụ na Lyst, maxi a nke Australian brand SIR nwere ọmarịcha akwa dị elu na ihu yana eriri na-agbanwe agbanwe na azụ iji hụ na elu dabara nke ọma.
Zụta ya ($ 340)
Dị na nha 0 ruo 3
mmega kacha mma maka afọ abụba ida
3. Topshop Gingham Mkpịsị-Up Back Uwe
Ikpokọta ọ bụghị naanị abụọ ma atọ nke oge okpomọkụ 2020 kachasị na-ewu ewu n'otu anya: gingham , puff-aka uwe na-emeghe-azụ.
Zụta ya ($ 85)
Dị na nha 2 ruo 14
4. nlele81 Madrid Cutout Stretch-Knit Midi Dress
Nke a minimalist ahu-con uwe na-enye anyị isi '90s vibes ga-ele anya dị nnọọ ka fabulous na ukporo slide na ngwụsị izu picnic dị ka ọ na-eme na strappy ikiri ụkwụ maka ụbọchị abalị.
Zụta ya ($ 290;$ 174)
Odikwa nha XS rue L
5. Hemant na Nandita Tiana Obere Uwe
Nhọrọ ọzọ dị mma maka ejiji ma ọ bụ ala, nke a na-eme nzuzu na-ewepụta ihe niile a na-ebipụta na-agwakọta ya na floral atọ mara mma.
Zụta ya ($ 427)
6. Uwe LPA Talulah
Otu ọkara nke ahaziri ahazi na-agbada n'etiti ma na-agbanye n'okpuru bust nwere ike inye aka nye ndị na-echegbu onwe ha banyere ịga kpamkpam n'atụghị egwu nkwado.
Zụta ya ($ 228)
Odikwa nha XXS na XL
7. Shein Plus Allover Bipute Open Back Beltes Uwe
Maka ndị na-enweghị mmasị n'ezie ka ikwe ka obi ha na-agba ọsọ n'efu kwesịrị ịhọrọ mbipụta nke na-etinye agba dị mfe dị ka oji ma ọ bụ ọcha. N'ụzọ ahụ, a ga-ekwekọ uwe ahụ na bralette na-ahazi, ọkacha mma na lace mara mma na / ma ọ bụ ụkpụrụ na-atọ ụtọ na azụ.
Zụta ya ($ 17)
Odikwa na nha S rue 4XL
8. Lulus Laghachi azụ Backless Red Bipute Mkpịsị-Up Backless Uwe
Ndabere azụ nwere ike inye nkwado nke nkwado ọzọ, na-enye gị ohere ịdọrọ ụdọ ahụ nke ọma ma ọ bụ yikwasị ya, dabere na akara gị masịrị gị.
Zụta ya ($ 69)
Dị na nha XS na XL
9. English Factory Cotton Eyelet Midi Uwe
Breezy eyelet gbakwunyere na-emeghe azụ na-eme ka midi a dị mma maka ụbọchị ndị ahụ na-enweghị atụ mgbe ị ga-ahọrọ iyi obere akwa dị ka o kwere mee.
Zụta ya ($ 120)
10. Onyinye Uwe Obere Ọnwa Na-efegharị
Otu ato nke ejiri eriri jikọtara ya na azụ, nke enwere ike gbanwee ya mgbe ọ masịrị, na-egosipụta slivers nke anụ ahụ kama ịhapụ ụwa ubu gị na ụwa. (Psst, nke ahụ na-emekwa ka cutie a dịkwuo mfe iyi na bra mgbe niile, ọ bụrụ na ịchọrọ.)
Zụta ya ($ 108)
11. Venus Meghee Uwe Elu-Elu
Zuru oke maka ụbọchị mmiri na mmiri a na-alụ ọhụrụ.
Zụta ya ($ 44;$ 18)
12. Rixo Lizzie Tie-Back E Bipụtara Crepe de Chine Mini Dress
Shellkpụrụ shea nke onye na-agba ọla edo bụ ọmarịcha ihe ọzọ maka okooko osisi ndị ọzọ na-ewu ewu n'oge okpomọkụ, ọnyá na ntụpọ polka.
Zụta ya ($ 365;$ 219)
13. AFRM Pico Ifuru Open Back Uwe
Kedụ ka ị ga - esi wepụta akwụkwọ nnwere onwe nke Liberty-esque na - atọ ụtọ nke ukwuu? Na-emeghe azụ na flirty n'akụkụ nchawa, n'ezie.
Zụta ya ($ 138)
14. Olileanya & Ivy Mepee Midaxi Uwe
Ruffles na ịkpụ-outs na bilie? Nke ahụ bụ ngwakọta na-emeri. E nwere ọtụtụ ihe na-aga na uwe a dị n’etiti, ọ bụ ezie na o nwere otu ọ ga - esi gbakọta iji mee otu ihunanya ọfụma anyị na - eme atụmatụ ịbịaru nwa agbamakwụkwọ ọ bụla na-agba mmiri n’oge ọkọchị
Zụta ya ($ 111;$ 45)
Dị na nha 2 ruo 12
Njikọ: Uwe mara mma nke 22 mara mma n'okpuru $ 150 iji zụta ugbu a ma yikwasị ya ugboro ugboro
akụkọ pharma na oge akụ na ụba
esi tufuo ntutu isi
ero na akpụkpọ ọgwụgwọ n'ụlọ
Atụmatụ maka ihu na-enwu gbaa n'ụlọ
mkpụrụ ojii maka ntutu
osisi iji mee ka ikuku dị ọcha